Sida loo Beddelaan DAT in DVD Si fudud
> Resource > DVD > Sida loo Beddelaan DAT in DVD
Sida loo Beddelaan DAT in DVD
File A video qaab DAT loo isticmaalaa in lagu sii qulquli MPEG video ka CD Video (VCDs). DAT video files waa la gubi karaa in DVD disc ah qaybsi sahlan iyo daawashada. Haddii aad horey u qabtay qaar ka mid ah DAT videos oo aad rabto inaad badalo DAT in DVDs u madadaalo ah oo ku saabsan weyn shaashadda TV, waxaad u baahan tahay gubi ah DAT xirfadeed iyo user-friendly in ay sameeyaan shaqo si fudud.
Wondershare DVD abuuraha ( DVD Creator for Mac ) taageertaa videos in DAT qaab gabi ahaanba. Waxaad isticmaali kartaa sida aad DAT kalsoonaan karo oo lagu DVD Converter. Just in qasabno yar, waxaad ka DAT video files ka dhigi kartaa DVD disc xirfadle-raadinta. Hoos waxaa ku qoran, Waxaan idin ​​tusin doonaa talaabooyinka faahfaahsan.
1 dejinta DAT videos si aad u this DAT weyn oo ay ku DVD gubi
Si aad ku dari DAT aydan xaraysan aad rabto, in aad sidoo kale ka dhacay badhanka buluug ku wareegsan oo ku saabsan dhinaca kore ee bidix ee suuqa si ay u doortaan "Add Files" doorasho ama ku dhacay "+ Import" badhanka in this app ee Murayaad bidix. Haddii kale, waxaad si toos ah u soo jiidi kartaa jeedi files DAT deegaanka si ay barnaamijkan.
Fiiro gaar ah: Haddii u baahan, waxaad riixi kartaa "↑" ama "↓" ikhtiyaarka ugu hooseysa in la beddelo xigxiga video ah, oo ku dhacay "dar horyaalka" badhanka in lagu daro horyaalka cusub.
Talooyin: (Ikhtiyaar) Haddii aad u baahan tahay inaad ka gooyay clips ka mid ah video ah, qaar ka mid ah, noola video screen, shaandheyn aad video, ama ku darto watermark iyo Cinwaan iwm, waxaad riixi kartaa doorasho Edit sudhaan video item aad rabto in aad kala video ah suuqa kala tafatirka. Markaas, shaqadan waxaa samayn.
2 Samee DVD menu ah DVD aad
Hit "Menu" tab in ay doortaan mid ka mid ah DVD menu template, ka dibna ku dar qaar ka mid ah xubno ka qabow ee template si astaysto DVD kuu gaar ah menu. Haddii aad rabto in ay doortaan mid ka dheeraad ah arrimo DVD menu , waxaa laga yaabaa in aad riix badhanka arrow hoos cagaaran oo ayan ku jirin.
3 Guba DAT in DVD
Guudmar aad mashruuca si loo hubiyo in saamaynta final. Waxaa, geliso DVD disc maran (DVD5 iyo DVD9 Labada ka mid ah), ka dhacay tab "Guba", sax ah "Guba si disc" doorasho, ka dibna ku dhufatey "Guba" button. Isla markiiba, app this bilaabi doonaa DVD-ka files DAT gubanaya. Dhowr daqiiqo ka dib, DVD disc ah Writen la saaray doonaa.
Fiiro gaar ah: Haddii aad awood DVD kaydinta kuma filna weyn mashruuca DVD oo dhan, app this cadaadin doonaan mashruuca oo dhan si toos ah.
Sida loo Guba Lightroom Muqaal in DVD
MPEG4 gubi: Sida loo rogo ama MPEG4 in DVD
Top 10 cajalid Software Gubidda for Windows
Windows DVD kii iyaga uumay uma gubi doonaa MP4? Xalka
NTSC in ay Pal Converter: Sida loo badalo NTSC in ay Pal (Windows 10 ka mid ah)
Sida loo Beddelaan iyo Guba taabanaysa isu-diridda si DVD
DVD Saxannada: Recordable DVD Saxannada & Rewritable DVD Saxannada
Sida loo Guba BitTorrent Movies in DVD